ZITHATHELE DeHavilland DHC8-Q 202 Iphakheji for FS2004 - Rikoooo
DeHavilland DHC8-Q 202 Iphakheji for FS2004
Usayizi 15.39 MB
Play 7 254
Okwe FSX ukuhluka okuhambisanayo Chofoza lapha I 8 Bombardier Dash noma Q Series,
okade kwaziwa de Havilland Canada Dash 8 noma DHC-8, uchungechunge twin-engined, uhla medium, turboprop izindiza. Ibe by de Havilland Canada (DHC) e 1984, basuke manje ezivezwa Bombardier Aerospace. Over 1,000 Dash 8s of bonke onobuhle sekwakhiwe nge Bombardier uqagula ingqikithi ukukhiqizwa run of 1,192 amayunithi abo bonke yokwahluka kuya 2016.
I Series 100 sinesikhundla esiphezulu of 39, Series 200 unawo amandla efanayo kodwa inikeza izinjini ezinamandla kakhudlwana.
Ukukhiqizwa kwe-Q200 futhi Q300 uchungechunge bunqamuka ngo 1998 futhi kuphela Q400 manje ekhiqizwa kodwa amakhulu -100 futhi -200 izinguqulo sihlale enkonzweni emhlabeni wonke.
Zonke 8s Dash esindiswe engxenyeni 1996 yesibili zihlanganisa Noise Active and Vibration Suppression (ANVS) uhlelo eklanyelwe yehlisa kakhulu umsindo womhlabathi endlwaneni eyakhiwe kanye namazinga vibration cishe lezo jet izindiza. Ukuze agcizelele ukuthula kwabo, Bombardier uqambe models Dash 8 njengoba Q Series turboprops (Q200, Q300 kanye Q400).
iphakethe Complete nge umsindo, VC en oyisibonelo repaint Continental, mnandi kakhulu ukundiza.
DeHavilland DHC 7 VC Passenger esekelwe Edition FS2004